Compressed Air System na Compressor Ụdị
site na nchịkwa na 21-05-13
Compressed Air System Sistemu ikuku ikuku nwere akụkụ ọkọnọ, nke gụnyere compressors na ọgwụgwọ ikuku, yana akụkụ chọrọ, nke gụnyere sistemụ nkesa na nchekwa na akụrụngwa ojiji. Akuku njikwa nke ọma jisiri ike ga -ebute ịdị ọcha, ...
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Global-Air Air Compressor?
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Global-Air Air Compressor? Ndị ahịa niile na-eche banyere isi ihe atọ nke ngwaahịa bụ ọnụahịa, ịdị mma yana ọrụ ịre ahịa. Banyere ọnụahịa, anyị na-emepụta ngwaahịa dị elu, anyị na-ejikwa akụrụngwa dị elu n'ahịa, yabụ na anyị anaghị atụnyere akara dị ala na ọnụahịa nke ndị nrụpụta ya ...
Ngwa nke ikuku abịakọrọ
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -eji ikuku mkpakọ maka ọtụtụ ọrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọ bụla nwere opekata mpe abụọ, na n'ime ụlọ nwere ike nwee narị narị ụzọ dị iche iche iji ikuku mkpakọ. Ojiji gụnyere ike ngwaọrụ pneumatic, nkwakọ ngwaahịa na akụrụngwa akpaaka, ...